Ku rakib sooyaalka firfircoon ee Samsung Galaxy S on your Android | Androidsis
antocara | | Codsiyada Android, Noticias, Samsung
Hadaad jeceshahay Samsung Galaxy S Waxa kale oo laga yaabaa inaad jeceshahay sawirradoodii sawir -gacmeedyada. Sida caadiga ah waxay dhacdaa marka terminal -ka suuqa aado ama ku dhowdahay inuu sidaas sameeyo, gidaarradiisii, sawirradiisii ​​noolaha, astaamaha, iwm. Samsung Galaxy S.
Laga soo bilaabo goleyaasha XDA waxaa ka imanaya 4 sawir -gacmeedyo firfircoon oo lagu tijaabiyey boosteejooyinka sida kan Nexus One, Motorola Droid ama Htc Evo iyo dabcan noqoshada asalka ah waxaa lagama maarmaan ah in la yeesho Android 2.1 ama ka sareeya.
Faylka leh afarta asal waa halkaan iyo Halkan Dooddii madasha XDA. Si loo rakibo, waxay ku kaydsan yihiin kaarka waxaana lagu rakibay dib u soo kabashada sidii haddii ay ahayd hal rom oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Ku rakib asalka Samsung Galaxy S ee animated on your Android
laguma rakibi karo xidid la'aan? sida hal app oo kale?
Haddii aad ku rakibto APK -yada Nexus One, waxay ku siinayaan qalad markaad furayso.
Waxaan ku rakibay zip -ka Android 2.2 ee HTC Magic -kayga iyo ikhtiyaarka Waraaqaha Live ma soo baxo, ma ogtahay sababta ay u noqon karto ???
hello Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan dhowr sawir ugu dhejin karo darbiga darbiga samsun galaxy l5500! Waan ka mahadcelin lahaa caawimadaada !!
Ku jawaab marianela
aad baan ugu faraxsanahay dijo
Waxaan haystaa galaxy ace oo runtu waxay tahay inaan helay asal aad u wanaagsan, laakiin markii aan geliyo waxaa jira marin aan xad lahayn oo internetka ah ama wax la mid ah, maxay ka dhigan tahay? Ma waxaad u bixisaa dheelitirkayga si aan u dhigo?
Ka jawaab soifeliz
HEY LINK -KA si aad u soo degsato JAWAABTA LIVE LOO QABAN KARO WAA KAN DIB U SOO CELIN KARAA MAHADSANID !!!
hello Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan dhowr sawir ugu dhejin karo darbiga darbiga samsun galaxy l5500! Waan ka mahadcelin doonaa caawintaada
hello Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan dhowr sawir ugu dhejin karo darbiga derbiga samsun galaxy mini S5570! Waan ka mahadcelin doonaa caawintaada
Waxaan si qalad ah u tirtiray shaqadii si aan u dhigo asalka firfircoon, waxaan ahay xidid, waxaan haystaa Samsung Galaxy I5500. Qof ma i caawin karaa? santy_bass@msn.com
Ka jawaab Santy Bass
Sideen u soo dejiyaa? Ii sheeg
Ka jawaab Jorge Porras Paniagua
Ku rakib Motorola Droid X sawirqaadeyaasha sawirada
Motorola Droid X hadda waa rasmi, dhammaan astaamaheeda waa la muujiyay